Glide OS (glideos.com) - MYSTERY ZILLION
Glide OS (glideos.com)
June 2010 edited June 2010 in Web Base
Transmedia ရဲ့ Glide OS က တခြား Webtops တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် ပိုပြီး ခိုင်မာတောင့်တင်းတာကို တွေ့ရ တယ်။ တစ်ယောက်တည်းပဲလုပ်လုပ်၊ အွန်လိုင်းအုပ်စုနဲ့ပဲလုပ်လုပ် လုပ်ကိုင်လိုသမျှကို အကူအညီပေးနိုင်မယ့် functional tool အမျိုးမျိုးပါရှိတယ်။ Basic Glidu OS account အတွက် အခမဲ့ရယူနိုင်တယ်။ အဲဒီ account အတွက် 10 GB အခမဲ့ online storage သုံးစွဲခွင့်ရှိပြီး account တစ်ခုတည်းအောက်မှာ အသုံးပြုသူ ခြောက်ဦးအထိ ဖြည့်စွက်ခွင့် ရှိတယ်။ တကယ်လို့များ 25GB storage မှာ အသုံးပြုသူ ၂၅ ဦးအထိ သုံးစွဲမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်လကို ၅ ဒေါ်လာ ဒါမှမဟုတ် တစ်နှစ်စာအတွက် ၄၉ ဒေါ်လာနဲ့ ပေးသွင်းရမှာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီထက် ပိုပြီး ထည့်သွင်းပါရှိစေပြီး 25 GB ထပ်တိုးယူဦးမှာဆိုရင် အပိုဆောင်းကြေးတစ်ဦးအတွက် ၅ ဒေါ်လာစီ ပေးရပါလိမ့်မယ်။ Glide ရဲ့ startup လုပ်ယူရတဲ့အချိန်က အမြန်ဆုံး*ဖြစ်သလို ဆွဲထုတ်တင်ပြမယ့် online system တွေထဲမှာ responsive ကလည်း အမြန်ဆုံးဖြစ်တယ်။ ဒီ Webtop မှာ word processing/spreadsheets/presentations/calender management/
contacts/website builder စတဲ့ apps တွေ ပါဝင်ထားတယ်။ Glide apps အတွက် လိုက်လျောညီထွေ အသုံးချ နိုင်မယ့် file format ပေါင်း ၂၅၀ ကျော်ရှိတဲ့အပြင် တခြား Glide OS အသုံးပြုသူတွေနဲ့ real time အခြေအနေ အတိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ online mettings တွေကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်ပါသေးတယ်။ မိမိ documents တွေအတွက် အခါ အားလျော်စွာ မျှေ၀အသုံးပြုလိုသူတွေကို မိမိအနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ပေးစေဖို့ gramelar controls နဲ့ webtop က ပံ့ပိုးပေးထားတယ်။ POP နဲ့ IMAP standards နှစ်ခုလုံးအသုံးပြုတဲ့ email client တစ်ခုကိုလည်း ခွင့်ပြုပေးပါတယ်။ ask.com က web result တွေကို ရယူနိုင်စေမယ့် integrated search tool တစ်ခုလည်း ပါတယ်။ အခြား apps တွေထဲမှာ basic photo edition နဲ့ music player တစ်ခုတို့က အထင်အရှားဖြစ်နေတယ်။ Productivity suite က Glide Engape ဆိုတဲ့ right-based social-networking သစ်တစ်ခုအတွက် ဆက်သွယ်ထားပေးတယ်။ Glide မှာ အပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲထားတယ်။ Desktop ပိုင်း၊ Glide HD လို့ ခေါ်တဲ့ online file system အပိုင်းနဲ့ web content တွေထဲ ၀င်ရောက်ဖို့ Glide Portal ပိုင်းတို့ပဲဖြစ်တယ်။ ဒီအပိုင်းက web-based system အတွင်းမှာ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းနဲ့ လမ်းညွှန်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ Browser screen ရဲ့ ထိပ်ပိုင်းကနေ အလွယ်တကူလမ်းကြောင်းတွေ ပြုထားတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Portal မှာတော့ ထွင်လုံးနည်းတယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။
flash သုံးထားတာနဲ့ တူတယ်။ eyeOS လေးကိုတော့ ပိုသဘောကျမိတယ်။ ဒါပေမယ့် eyeOS မှာက Online colboration မပါဘူးနဲ့တူတယ်။ အရင်တုန်းက စမ်းသုံးဖူးတယ်။ သိပ်ပြီးတော့ သဘောမကျမိဘူး။ flash ဆိုတော့ မြန်မာလို ရိုက်လို့မရဘူးလေ။ အဲမှာ ပြဿနာ ဖြစ်တာပဲ။
သုံးကြည့်လိုက်တယ်ဗျ လုပ်ထားတာက Functionality အတော်လေးကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ Usability ကိုတော့ သိပ်သဘောမကျဘူးဗျ UI တွေက Consistant မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ် Button တွေထားတာတွေ Application တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူဘူးဖြစ်နေတယ် နောက်ပြီးပိုဆိုးတာက တစ်ချို့ Application တွေမှာ Menu ပါပြီး တစ်ချို့မှာ Tools Bar ပါတယ်။ အဆိုးဆုံးတစ်ခုက Application တစ်ခုနဲ့တစ်ခု Load လုပ်ပုံမတူတာပဲ တစ်ချို့က Current Window မှာပဲ Run ပြီးတော့ တစ်ချို့က New Window မှာသွားပွင့်တယ် အဲဒီ့တော့ User တွေကတွက်က Application တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ရင် ဘယ်နေရာကို အာရုံစိုက်ရမယ်ကို အတော်လေးစဉ်းစားယူရမလိုဖြစ်နေတယ် ဖြစ်သင့်တာက Application Loading ဟာ တစ်ခုပဲပုံသေဖြစ်သင့်တယ်။ Icon တွေကတော့ အတော်ထူးတယ် ခေါ်ရမယ် Draw ကိုဖွင့်လိုက်ပြီး ရောင်စုံခဲတံရွေးလိုက်တာ Cursor ဟာ ကြောက်စရာကောင်းလောက်တဲ့ ရောင်စုံခဲတံဆိုက်ကြီးဖြစ်နေတယ် အဲဒီတော့ စက်ထဲမှာဘာမှမထားပဲ Browser တစ်ခုနဲ့ပဲ အစုံသုံးလို့အဆင်ပြေမယ့် Cloud OS တစ်ခုအနေနဲ့ ယုံယုံကြည်ကြည် လက်ခံပြီးသုံးဖို့ နည်းနည်းခက်နေတယ်
For me, Google Chrome OS is the best for cloud OS. :P
ဒါကို သုံးပြီးစဉ်းစားမိတာကတော ့... User တွေ အမြင်ရှင်းနေအောင် ဘာလို ့မလုပ်လဲဆိုတာပါပဲ ။
ကိုလူပျိုပြောသလို ့ပဲ...အာရုံတော ့နည်းနည်းနောက်တယ် :P...။။
တော်ပါပီ..ကိုယ်ဘာသာ ဆူဇီနဲ ့ပြန်ငြိမ်နေတာကောင်းပါတယ်။
လန်းပါတယ်..အသွင်အပြင်လေးတွေကောင်းတယ်။ဒါပေ ့မယ်..သိပ်မမိုက်ဘူး။သုံးရတာအဆင်မပြေဘူး။ ကိုလူပျိုပြောထားသလိုပါပဲ..အာရုံနည်းနည်းနောက်တယ်။